Khuphela iPDF yethu yoRhwebo lwe-Forex yowama-2022! - Funda ukurhweba
Khuphela i-PDF yethu ye-2022 yokuRhweba ngePaul!
I-Forex yethu yokurhweba ngePDF, kukholelwa ngokubanzi ukuba i-forex yenye yezona ntengiso zinkulu kunye nolwelo (okanye ulwelo) kwihlabathi. Ngamanye amaxesha kubizwa ngokuba yiFX, iimali zithengiswa iiyure ezingama-24 ngosuku-iintsuku ezisi-7 ngeveki.
Igama elithi 'forex' ngumxube 'wotshintshiselwano lwangaphandle' kunye 'nemali'. Ngamagama alula, ibhekisa kwinkqubo yokutshintshiselana ngemali enye-kwaye xa sithetha ngokubanzi, oku kuya kuba kokhenketho, urhwebo, urhwebo nezinye izizathu ezininzi.
Kule forex trading PDF we are going to talk about what forex trading is and some of the commonly used terminology in the industry. We will also explore the many different forex charts available, and we’ve thrown in some tips along the way to help you to become a better forex trader from the offset!
Funda iiNkonzo ezi-2 zeNtengiso yeeNqaku eziSimahla
Fumana imiqondiso emi-3 yasimahla ngeVeki nganye
Akukho Ntlawulo okanye Iinkcukacha zeKhadi ezifunekayo
Vavanya ukuSebenza kweeMpawu zeNqanaba eliPhakamileyo
Amabini amakhulu, amancinci, kunye neePair eziNgaphandle eziGutyungelweyo
Fumana imiqondiso yasimahla ngoku
Iyintoni ukuThengiswa kweeNkcazo?
Ngomndilili ojikeleze i-5 trillion yeedola ezithengiswa mihla le kwibala le-forex, kuyacaca ukuba esi sixhobo semali sithandwa kakhulu ngabarhwebi nabatyali zimali kwihlabathi liphela.
Ngokusisiseko, sisenzo sokuthengisa okanye ukuthenga iimali zamanye amazwe. Ewe kunjalo, zonke ezi zinto zisetyenziswa ziibhanki, amashishini kunye nabatyali mali ngezizathu ezahlukeneyo njengenzuzo, ukwenza urhwebo, ukutshintshiselana ngeemali zangaphandle kunye nokhenketho.
Amagqabantshintshi apha (uGamuchirai Masiyiwa, GPJ Zimbabwe)
Enye yeenzuzo ezinkulu ngokurhweba kwangaphambili kukuba emva kokuvula isikhundla, abarhwebi bayakwazi ukubeka ilahleko yokuma okuzenzekelayo kunye namanqanaba enzuzo (oku kuvala urhwebo).
Imarike ye-Forex yindawo yokuthenga okanye yokuthengisa ngokuchasene nomnye ezahlukeneyo zelizwe, kwihlabathi jikelele. Imali iya kutshintshwa ukusuka kwenye imali iye kwenye, kwaye izibini zemali ezivela kwihlabathi liphela zithengisa ngokuqhubekayo 24/7.
Naphi na apho kuthengiswa khona iimali zangaphandle ezimbini, unokuqiniseka ukuba imarike ye-forex ikhona ngaphandle kwexesha lendawo.
Isigama esisetyenziswayo sokurhweba
Kule candelo le-forex yethu yokuthengisa i-PDF, siza kuqhuba ngezinye zezona zigama eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukuthengiswa kwishishini.
Ipip imele 'inqaku ngepesenti', kwaye ibonisa naluphi na utshintsho oluncinci oluqatshelwe ngababini bemali kwintengiso ye-forex. Umbhobho umele elona xabiso lincinci kunokwenzeka ukuba ikowuti yemali inokutshintsha. Umzekelo, i-0.0001 yexabiso lentengo- xa kuziwa kwixabiso lesibini semali. Oku kubizwa ngokuba 'yiyunithi yesiseko' sezibini.
Ukuba ixabiso lokubhida le-GBP / USD pair litshintsha ukusuka kwi-1.2590 ukuya kwi-1.2591, oku kubonisa umahluko wombhobho omnye.
Umahluko phakathi kwexabiso lentengiso kunye nexabiso lokuthengwa kwesibini semali saziwa njenge sasaza. Ezona zibini zincinci zithandwayo (zihlala zisetyenziswa kakhulu) zihlala zisasazekile. Ngamanye amaxesha, oku kunokuba kungaphantsi kwepip.
Xa kuthengiswa iarhente yemali esetyenziswa ngokuxhaphakileyo ukusasazeka kuhlala kusezantsi. Ixabiso elipheleleyo leebini zemali kufuneka lidlule ukusasazeka ukwenzela ukuba urhwebo lwe-forex lube luncedo.
Asikwazanga ukwenza i-forex yokuthengisa i-PDF ngaphandle kokukhankanya amandla. Ukuze abathengisi be-forex bonyuse inani lezorhwebo ezifumanekayo kubathengi bayo, kufuneka babonelele ngemali ngendlela yokunyusa.
Ngaphambi kokuba uthengise usebenzisa amandla, kufuneka ubhalise kwi-forex broker kwaye uvule i-akhawunti yemida. Ukuxhomekeka kumthengisi kunye nobukhulu besikhundla, ubukhulu becala buhlala ngo-1: 30 ukuba ungumthengi wentengiso (umrhwebi ongeyongcali). Abanye abathengisi be-Forex baselunxwemeni baya kunika ngaphezulu kakhulu kunoko ukuba ufuna imida ephezulu.
Nayi imizekelo embalwa yoluvo olungcono lokunyusa:
Masithi uthengisa i-EUR / GBP enexabiso eli-1.1700
Ucinga ukuba ixabiso liya kukunyusa xa ufaka indawo yokuthenga
Une- £ 500 kuphela kwiakhawunti yakho ye-forex yorhwebo
Ufuna ukurhweba nangaphezulu, ke ngoko usebenzise amandla angama-20x
Ixabiso le-EUR / GBP lenyuka nge-2%
Kwipali esemgangathweni ye- $ 500, ngewenze inzuzo ye- $ 10
Kodwa, njengoko ufake isicelo se-20x, le inyuke yaya kwi- £ 200
Nangona kunjalo, ukuba ixabiso lesibini liye phantsi nge-2%, ungaphulukana ne- £ 200.
Kungenxa yalo mzekelo ukhankanywe apha ngasentla ukuba kufuneka ulumke xa usebenzisa amandla. Ukuba imeko enokwenzeka inokwenzeka kwaye iakhawunti yakho iwela ngaphantsi kwe-0, kuya kufuneka unxibelelane nomthengisi wakho we-forex kwaye ucele umgaqo-nkqubo malunga nokukhuselwa kwemali eseleyo.
Iindaba ezimnandi zezokuba bonke abathengisi be-forex abalawulwa yi-ESMA (i-European Securities and Markets Authority) baya kuba nakho ukukunika eli nqanaba longezelelekileyo lokhuseleko, baqinisekise ukuba awuzukuba namatyala kumthengisi wakho. Kufana nokumisa okuthintela ukuba ungawisi ngaphantsi kwe-0.
Imida yindlela elungileyo yabarhwebi yokwakha ukubonakaliswa kwabo. Ukubeka ngokulula, ukuze umrhwebi agcine isikhundla kwaye abeke urhwebo, umrhwebi kufuneka abeke phambili isixa esithile semali kuqala- lo ngumda. Endaweni yokuba ibe lixabiso lokuthengiselana, umda unokuthelekiswa nediphozithi yokhuseleko. Oku kuyakubanjwa ngumrhwebi ngexesha lokuthengisa kwangaphambili kwe-forex.
Kuqhelekile ukuba abathengisi be-forex banike abathengi babo ukufikelela kubungakanani (jonga ngasentla). Kungenxa yokuba xa sithetha nje, umrhwebi othengisayo akanayo i-margin eyoneleyo ukuze bakwazi ukurhweba ngevolumu ephezulu (kulungile, ephezulu ngokwaneleyo ukwenza inzuzo efanelekileyo).
Ukuze unciphise umngcipheko wokuvezwa kwaye ulungelelanise ibhalansi yakho, unokucinga ngokuthintela. Le yinkqubo ebandakanya ukuthengisa kunye nokuthenga izixhobo zemali. Xa kukho intshukumo kwiimali, isicwangciso sokubamba sinokunciphisa umngcipheko wokutshintsha kwamaxabiso. Ukukhuselwa kobu buchule kuhlala sisisombululo sethutyana.
Abahwebi bahlala bejika bethanda ngenxa yoloyiko ngenxa yemithombo yeendaba yezemali yokuxela ukungazinzi kwiimarike zemali. Oku kuhlala kuphantsi kweziganeko ezinkulu ezinje nge-geopolitical turmoil (ungquzulwano embindini mpuma), ingxaki yezempilo kwihlabathi liphela (COVID-19) kwaye ke ingxaki enkulu yezemali ka-2008.
Ukuthintela ukungahambi kakuhle kwamaxabiso, abadlali beemarike baya kuthi basebenzise izixhobo ezifumaneka kwimarike. Oku kukuzikhusela emngciphekweni ngeyona ndlela inzima. Ukuhlalwa kuya kukunika ukuguquguquka xa kuziwa ekuphuculeni amava akho okuthengisa, kodwa akukho ziqinisekiso zokuba uya kukhuselwa ngokupheleleyo kuyo nayiphi na ilahleko okanye umngcipheko.
Umzekelo wesicwangciso sokukhusela uya kuba:
Njengotyalomali ochaphazelekayo, uvula indawo eyahlukileyo kwezorhwebo.
Ukuqhubeka nokucacisa, masithi unesikhundla eside kwi-GBP / USD
Unokuthatha isigqibo sokuvula indawo emfutshane kwi-GBP / GEURBP ngokunjalo.
Oku kukwabizwa ngokuba luthango ngqo.
Ngelixa kunokuthatha ixesha ukwenza ukuba intloko yakho ijikeleze ukuya kwiimarike ze-forex, umbono ocacileyo kukuba ubonakalisa zombini iziphumo. Oko kukuthi, nokuba yeyiphi indlela yentengiso ehambayo, uya kuhlala kwindawo yokuqhekeka (ngaphantsi kwezinye iikhomishini zorhwebo).
Indawo ye Forex
Ireyithi yokutshintshiselana yeemali ezimbini kuhlala kubhekiswa kuzo njengendawo 'yokutshintsha'. Ngokukodwa, urhwebo lwendawo kukuthengiselana, ngokubhekisele kwintengiso okanye ukuthengwa kwemali. Ngokusisiseko, indawo ekuyo i-forex kukuthengisa kunye nokuthenga iimali zamanye amazwe.
Umzekelo olungileyo woku ngowokuba ubuya kuthenga isixa esithile seerandi zaseMzantsi Afrika (ZAR), kwaye utshintshe oko ngeedola zaseMelika (i-USD).
Ukuba ixabiso le-ZAR liyenyuka, uyakwazi ukutshintshisa i-USD yakho ukubuyela kwi-ZAR, oko kuthetha ukuba ufumana imali engaphezulu xa uthelekisa nemali obuyihlawule kuqala.
Isivumelwano somahluko (CFD)
I-CFD sisivumelwano esichaza ukuhamba kwamaxabiso ezixhobo zemali. Ke, ngaphandle kokuba nepropathi yakho, usenakho ukwenza elona xabiso lokuhamba kwexabiso, ngelixa uphepha isidingo sokuthengisa okanye ukuthenga isixa esikhulu semali.
Ii-CFDs ziyafikeleleka nakwiibhondi, izinto ezithengiswayo, ii-cryptocurrensets, ii-stocks, ii-indices kwaye kunjalo- forex Nge-CFD uyakwazi ukurhweba ngokuhamba kwexabiso, usike isidingo sokuzithenga konke konke.
Iitshathi ze-Forex ezahlukeneyo
Eli candelo le-forex yethu yokuthengisa i-PDF malunga neetshathi ze-forex. Xa kuziwa kwiqonga leMetaTrader, abarhwebi banokusebenzisa iitshathi zebar, iitshathi zemigca kunye neetshathi zezibane. Ngokwesiqhelo unokutshintsha phakathi kweetshathi ezahlukeneyo, kuxhomekeke kukhetho lwakho, ngokulula.
Apha ngezantsi sidibanise inkcazo yohlobo ngalunye lwetshathi yakho.
Ingxelo yokuqala yetshathi yekhandlela eyaziwayo ngoku yayisetyenziswa eJapan ngeye-1700s kwaye yangqineka iluncedo kubathengisi belayisi. Kule mihla, itshathi yamaxabiso ngaphandle kwamathandabuzo yeyona aziwayo phakathi kwabarhwebi kwihlabathi liphela.
Njengetshathi yebar ye-OHLC (jonga ngezantsi), iitshathi zezibane zezibane zibonelela ngamaxabiso asezantsi, aphezulu, avulekileyo kwaye asondeleyo ngexesha elimiselweyo. Phila abathengisi be forex bayayithanda le tshathi ngenxa yokubonakala kwayo kunye noluhlu lwe amanyathelo ixabiso iipatheni ezisetyenzisiweyo.
Ihlala icetyiswa, ngaphandle kokuba ungumrhwebi onamava, ukusebenzisa iindlela zedemo zasimahla zokurhweba. Oku kukuvumela ukuba ufumane ukuqonda okungcono malunga nendlela urhwebo olusebenzayo olusebenza ngayo ngaphambi kokuba uthathe nayiphi na ingozi enkulu kwimarike.
Itshathi yeBhari ye-OHLC
Emi 'evulekileyo, ePhakamileyo, ePhantsi, evaliweyo', itshathi ye-OHLC ilungele ukubonisa nayiphi na intshukumo kwixabiso leasethi, eyenziwe ngexesha elithile (umzekelo-iyure enye, okanye usuku lokurhweba).
Njengoko isihloko sibonisa, le yitshathi yebha, kwaye ixesha ngalinye umrhwebi ejonge kuyo iya kuboniswa njengebha. Ngamanye amagama, ukuba ujonga itshathi yemihla ngemihla uza kubona ukuba yonke ibha ilingana nosuku olupheleleyo lokurhweba.
Ngokungafaniyo netshathi yomgca (jonga ngezantsi), itshathi yebar ye-OHLC yahlukile ngengqondo yokuba ibonisa uluhlu olubanzi lwamaxabiso kunye nolwazi olufana 'nokuvulwa', 'phezulu', 'okuphantsi' kunye 'nokuvalwa', yiyo loo nto igama.
Elona xabiso liphezulu lemarike elithengisiweyo ngexesha elibekiweyo liya kuboniswa kukuphakama kwebar.
Ixabiso elisezantsi lemarike elithengisiweyo ngaphakathi kwexesha elikhethiweyo limelwe liphantsi lebar.
Udwi olungasekunene luya kubonisa ixabiso lokuvala, kwaye umda osekhohlo iya kuba lixabiso lokuvula.
Imivalo ebomvu ikwabizwa ngokuba yimivalo yomthengisi; oku kungenxa yokuba ixabiso lokuvala lingaphantsi kwexabiso lokuvula
Imivalo eluhlaza ikwabizwa ngokuba yimivalo yomthengi; ejongene ngasentla. Kungenxa yokuba ixabiso lokuvula liphantsi kunexabiso lokuvala.
Ngolu tshati lwamaxabiso, abarhwebi bayakwazi ukuseka ukuba ngubani olawula intengiso, nokuba ngabathengisi okanye abathengi.
Uhlalutyo lwe-OHLC yayiyibloko yokuqala yokwenziwa kweetshathi zesibane esithandwayo (nceda uqhubeke phantsi).
Le tshathi ithathwa njengolona hlobo lwexabiso leetshathi, kodwa oko akuthethi ukuba ayiloncedo. Esi sisixhobo esihle sokujonga umfanekiso omkhulu xa kuziwa kwimikhwa.
Kuxhomekeke kweliphi ixesha elibekiweyo (le inokuba yiyo nantoni na ukusuka kwimizuzu ukuya kwiinyanga), kodwa ngenxa yengxabano masithi usebenzisa itshathi yemihla ngemihla. Itshathi yomgca icwangcisa amaxabiso asondeleyo ekupheleni kwelo xesha; ke kule meko, ekupheleni kosuku, umgca uya kudibanisa ixabiso lokuvala lolo suku.
Kweli candelo lethu le-forex yokuthengisa i-PDF, siza kuthetha ngeendlela ezahlukeneyo onokuthengisa ngazo kwaye uthenge indawo ye-forex kunye nezinto ekufuneka ujonge kuzo.
Amaxabiso kunye neekowuti
Xa kuziwa kurhwebo lwe-forex uza kubona zombini 'ibhidi' kwaye 'ubuze' amaxabiso:
Ixabiso lokubhidaEli lixabiso onokuthengisa ngalo ngemali.
Buza ixabisoEli lixabiso okwazi ukuthenga ngalo imali
Xa kuziwa kurhwebo lwe-forex unokurhweba ngokufutshane nangexesha elide, kodwa soloko uqinisekisa ukuba unokuqonda okufanelekileyo ngokurhweba kwangaphambili ngaphambi kokuqalisa urhwebo. Emva kwayo yonke loo nto, ukurhweba kwangaphambili kunokuba yinto enzima ukuqala ngayo, ngakumbi xa uxuba imisebenzi emide kunye nemifutshane.
Urhwebo olude (Thenga)
Ngamafutshane, ukuhamba ixesha elide kuhlala kusisigama esisetyenziselwa ukuthenga. Ke, xa abathengisi belindele ukuba ixabiso leasethi linyuke, baya kuhamba ixesha elide.
Njengomzekelo wenqanaba elide:
Yithi ubambe indawo ende kwisixhobo esiphambili esithengiweyo
Umzekelo, i-USD / JPY
Oku kuthetha ukuba ulindele ukuba i-USD izonyuka ngexabiso ngokuchasene ne-JPY
Ukuba utyala imali eyi-1,000 1,000 yeedola kwi-USD / JPY ngesikhundla eside, emva koko ubeka nje i- £ XNUMX ukuba isibini siya kunyuka ngexabiso
Urhwebo olufutshane (Thengisa)
Xa abathengisi be-forex balindele ukuba ixabiso le-asethi liwe, baya kufutshane. Oku kuthetha ukuxhamla ngokuthenga ngexabiso elincinci. Ukufezekisa oku, kufuneka ubeke i-oda yokuthengisa.
Amaxabiso wangoku kunye neMfuno
Ireyithi yokutshintshiselana yangoku yesibini se-forex ihlala isekwe kwimikhosi yentengiso. Oku kuyakutshintsha kwisibini-nge-yesibini. Njengoko besitshilo ngaphambili, kuya kufuneka uthathe ukusasazeka kwi-akhawunti, ke kuya kuhlala kukho umahluko omncinci kumaxabiso.
Umzekelo, ukuba utshintshiselana nge-1 yeedola nge-17 ZAR, intengiso kunye nexabiso lokuthenga elinikezelwa ngumthengisi wakho we-forex liya kuba lelo cala lelo nani. Iibhanki zemali kunye neyona nto ibonakalayo yokubonelela kunye neemfuno eziqhotyoshelwe kuzo ziya kuthathwa njengezona zininzi kwiimarike ze-forex. Ubonelelo kunye nemfuno yento ibulela kutyalo-mali lwabangenisa elizweni, abathumela ngaphandle, iibhanki kunye nabarhwebi - ukukhankanya nje abambalwa. Le yindlela inkundla ye forex ekhayeni elingaphezulu kwe- $ 5 yezigidi zezigidi zokuthenga nokuthengisa izikhundla mihla le!
Ezona zibini zemali zelwelo ke ngoko zezona zifunwa kakhulu. Njengomzekelo, i-GBP / i-USD ibonelela ngamathuba amaninzi orhwebo lwexesha elifutshane ngenxa yemali eninzi iipipi yahamba yonke imihla (90-120 ngokomndilili). Ngokuchasene noko, i-AUD / NZD ayithambekisi ukuhambisa iipip ezininzi ngosuku. Xa sele uthethile, ukuba unokuqonda kakuhle ezinye zeemali ezingaqhelekanga- thina kwi-Learn 2 Trade asitsho ukuba akunakwenzeka ukwenza kakuhle.
Inkqubo yokuRhweba ngeForex yokuThathela ingqalelo
Xa uziva ukuba ukulungele ukuthatha i-plunge kwaye uqalise ukurhweba bukhoma, kuya kufuneka ukhethe inkqubo yokurhweba kwangaphambili. Kukho isixa esikhulu se izicwangciso zorhwebo ukuba ukhethe kwi. Kungenxa yokuba abatyali mali, abacebisi, iinkampani kunye neebhanki bezirhweba amashumi eminyaka.
Kule nxalenye ye-forex yokuthengisa i-PDF, siza kuchaza ezimbalwa izicwangciso ezikhoyo kuwe.
Urhwebo lwangaphakathi: Ukugxila kwi-1 yeyure okanye iiyure ezi-4 zexabiso lentengiso, ukurhweba kwangaphambili kwe-intraday kuthathwa njengeyona ndlela ibalaseleyo yokuthengisa. Ukugxila kwiiseshoni ezikhokelayo kwintengiso nganye, ezi ntengiso zihlala zivulekile naphina phakathi kweyure enye kunye neeyure ezi-1. Kananjalo, oku kungayenza ibe ukhetho olufanelekileyo lwabaqalayo.
imali yeloo lizwe Scalping: Esi sicwangciso-qhinga sihlala sijongwa njengeyona ndlela iphantsi yokuthengisa. Ijolise ekuthengiseni nasekuthengeni izibini zemali ngaphakathi kwexesha elifutshane kakhulu. Oku kuhlala kuphakathi kwento yemizuzwana, kunye neeyure ezi-2 ukuya kwezi-3 kwezona zininzi. Esi sicwangciso senza ukuba kube luncedo kakhulu ekufumaneni inani leenzuzo ezincinci, ngethemba lokudala ingqokelela yeenzuzo.
Ukurhweba: Ihlala ibhekiswa njengendlela yexesha eliphakathi, ngokungafaniyo ne-scalping kunye ne-intraday, ukurhweba ngokurhweba kugxila kukuhamba kwexabiso elikhulu. Ngeli qhinga, abarhwebi bayakwazi ukushiya urhwebo lwabo luvulekile iintsuku okanye iiveki. Abanye abathengisi bayathanda ukusebenzisa olu khetho ukuze bahombise urhwebo olukhoyo lwemihla ngemihla.
Ukuba ufuna ukuthenga nokuthengisa ngababini bemali ukusuka kwikhaya lakho (okanye nakwisixhobo sakho esiphathwayo), kuyakufuneka usebenzise iqonga lokuthengisa. Ngaphandle koko kubhekiswa njengomthengisi we-forex, kukho amakhulu ngekhulu lamaqonga orhwebo asebenzayo kwisithuba se-intanethi. Oku kwenza ukuba kube nzima kakhulu ukuba wazi ukuba ngomphi umthengisi oza kubhalisa naye.
Kula macandelo angezantsi e-forex yethu yokuthengisa i-PDF, sichaza ezinye zeembono ekufuneka uzenzile.
Izixhobo zoHlahlelo kunye neempawu
Kuya kufuneka ujonge izixhobo zohlalutyo ezikhoyo kuwe. Ngamanye amaxesha, oku kungangeniswa, ngelixa ezinye zibonelela ngezixhobo ezinje ngohlalutyo lobuchwephesha kunye nohlalutyo olusisiseko. Alithandabuzeki elokuba ukufikelela kuluhlu lwezalathi zobuchwephesha, iitshathi zamaxabiso aphilayo, kunye neendaba zangoku kunye nedatha evela kwintengiso yemali yinxalenye ebalulekileyo yorhwebo lwe forex.
Nangona kunjalo, ukuba uyakwazi ukufikelela kwezi zikhombisi zobuchwephesha ngaphakathi kweqonga lakho lokuthengisa, kuya kungqina ukuba kuluncedo kakhulu. Kungenxa yokuba iya kukugcinela umsebenzi omninzi wemilenze kufuneka uhambe phakathi kweendawo ezahlukeneyo kunye nemithombo yolwazi.
Amanye amaqonga orhwebo akhawulezayo nolula ziiMetaTrader 5 (MT5) kunye neMetaTrader 4 (MT4). Ngelixa i-MT4 yenziwe ngokukodwa kubarhwebi be-forex, i-MT5 inika abarhwebi ukufikelela kwi-CFDs (kwii-CFDs, nceda ubone inkcazo phantsi 'kwesigama esisetyenziswa ngokuRhwebayo esiqhelekileyo' kolu shishino lwe-forex ye-PDF).
Ngokubalulekileyo, zombini i-MT4 kunye ne-MT5 ziindawo zokurhweba ezikhawulezayo nezamkelekileyo, zombini zibonelela ngedatha yentengiso ebukhoma kunye nokufikelela kwiitshathi ezinobunzima.
Ukuzithemba kwi-Forex Broker yakho
Kubalulekile ngaphambi kokuba uqale urhwebe ngokungathandabuzekiyo ukuba uthembele ngokupheleleyo kwiqonga lokurhweba oceba ukulisebenzisa. Oku kunjalo ngakumbi ukuba unenjongo yokusebenzisa isicwangciso se-scalping, umzekelo.
Nangona kunjalo, ukuba uyathanda ukurhweba, kubalulekile ukuba ube noxolo lwengqondo kunye nemali yakho ukuba uqinisekile ngokupheleleyo ngokuphunyezwa ngokukhawuleza kwedatha. Kukwayimeko yokuchaneka kwamaxabiso acatshuliweyo, kunye nesantya sokwenza iodolo. Zonke ezi zinto ziya kukunceda ukuba ube namava okurhweba ngempumelelo kwi-forex.
Ukwenza ukuba ukwazi ukuwasebenzisa kakuhle amathuba amatsha, umthengisi we-forex efanelekileyo uya kufumaneka kuwe iiyure ezingama-24 ngosuku kunye neentsuku ezisi-7 ngeveki, ngokuhambelana neeyure zokuvula ze-forex.
Umphathi weAkhawunti eZimeleyo
Ukukusindisa ekubeni ucele ukuba umrhwebi wakho akuthathele inyathelo, umrhwebi wakho we-forex kufuneka akwenze ukuba ukwazi ukulawula iakhawunti yakho kunye nentengiselwano yakho ngokwahlukeneyo.
Ngokwenza oku, uya kuba kwimeko engcono kakhulu yokuphendula ngokukhawuleza kulo naluphi na utshintsho olwenziweyo kwimarike, kwaye ngethemba, uza kwenza elona thuba linokubakho. Oku kuyakwenza ukuba ufumane ulawulo olungcono kuzo naziphi na izikhundla ezivulekileyo njengoko zivela kwaye zivela nini.
Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba umthengisi we-forex oyikhethileyo yinkampani eyaziwayo, eya kuqinisekisa ukuba ulwazi lwakho lomntu kunye nemali yokurhweba ikhuselwe ngokupheleleyo kwaye ixhaswe.
Ukwahlulahlula kuhlala kusetyenziswa phakathi kwabarhwebi be-forex njengendlela yokwahlula imali yakho kwingxowa-mali yenkampani (okt iindleko zabo zemihla ngemihla, amatyala kunye neendleko zokuqhuba). Ke, nokuba kwenzeka ntoni kumthengisi we-forex, imali yakho ikhuselekile kwaye yahlulwe.
Ukuba ufumanisa ukuba umthengisi we-forex akakwazi ukwenza oku, singacebisa ukuba ufumane umthengisi olunge ngakumbi njengoko kusisiqhelo kule mihla. Zonke iarhente zabarhwebi ezidwelisiweyo ukuya esiphelweni sokurhweba ngefayile ye-forex ilawulwa ubuncinci ngumzimba omnye onelayisensi.
Ngokumalunga nokuseta njengomrhwebi we-intanethi okwi-intanethi, amanyathelo ahlala eqhubeka nokuba umrhwebi othatha isigqibo sokujoyina. Apha ngezantsi sidwelisa amanye amanyathelo oza kuyithatha.
Ukuze uvule iakhawunti, kuyakufuneka ufake iinkcukacha zakho. Iinkcukacha ezisemgangathweni ezicelwe ngumthengisi ziya kuba zizinto ezifana negama lakho, idilesi yokuhlala, kunye neenkcukacha zonxibelelwano.
Abanye abarhwebi bayakufuna imeko yakho yerhafu kwaye bayakukucela ukuba ubonelele ngeenkcukacha zemali ezinje ngobume bengqesho, ixabiso lilonke kunye nengeniso yesiqhelo.
Inyathelo 2: Amava orhwebo
Abarhwebi be-Forex bahlala befuna ukuqinisekisa ukuba unenqanaba elithile lamava okurhweba (nangona oku akusoloko kunjalo). Kule meko, kuya kufuneka uphendule imibuzo emininzi ekhethiweyo esekwe kumava akho. Oku kuhlala kuyinto elula.
Inyathelo 3: Ukuqinisekisa isazisi sakho
Eyaziwa ngokuba yi-KYC kolu shishino (Yazi uMthengi wakho), oku kuthetha nje ukuba umthengisi we-forex uzakufuna ukuba ungqine ukuba ungubani na. Abanye abarhwebi bayakuqinisekisa oku besebenzisa iikopi ezifundwe ngamaxwebhu. Esi sisazisi esikhutshwe ngurhulumente (ipasipoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba) kunye nobungqina bedilesi (into eluncedo kunye nengxelo yeakhawunti yebhanki).
Inyathelo 4: Ukubeka iiNgxowa-mali
Ngoku kuya kufuneka ukhethe indlela oyikhethayo yokuhlawula (uhlala uludwe oluluhlu). Gcina ukhumbula ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukungena kwiakhawunti yakho yorhwebo kuya kuxhomekeka ikakhulu kwindlela yokubhatala- ke soloko ujonga oku ngaphambi kokuba wohlukane nemali yakho.
Iindlela zokuhlawula ezixhaswayo zihlala kubandakanya ukubhatala / ikhadi lebhanki letyala okanye iakhawunti yebhanki. Abanye abarhwebi bade baxhase i-e-wallets ezinjengePaypal kunye neSkrill.
Inyathelo 5: Qalisa ukuRhweba
Emva kokufunda i-forex yethu yokuthengisa i-PDF kufuneka ngoku uziva uzithembile ngokwaneleyo ukuba ungaqala ukurhweba. Nangona kunjalo, sicebisa ukuba usoloko uzama idemo yokurhweba ye-forex yasimahla kuqala. Oku kuyakuvumela ukuba uvavanye iindlela zakho zorhwebo ezisandula ukusekwa ngaphambi kokubeka umngcipheko kwikomkhulu lakho.
Kwicandelo elilandelayo le-forex yethu yokuthengisa i-PDF, sivavanya ezinye zeempawu ezibaluleke ngakumbi zobuchwephesha kunye nokuqonda kwemakethi okusetyenziswa ngabarhwebi abanamava.
Okokuqala okuqulunqwe nguRichard Donchian, amajelo e-donchian anokulungiswa ngendlela othanda ngayo, ngokweeparameter. Ukuba ukhetha ukujonga ukophuka kweentsuku ezingama-30, umzekelo, isalathi siyakwenziwa ngokuthatha esisezantsi esisezantsi, kunye nesona siphezulu siphezulu kwelo xesha (ke kulo mzekelo amaxesha angama-30).
Xa ujonga umndilili ohambahambayo kwisitishi se-donchian unokujonga umyinge osuka kwiintsuku ezingama-25 ukuya kwiintsuku ezingama-300 ezidlulileyo. Isalathiso esivunyelweyo sigqitywe sisikhokelo somndilili wexesha elifutshane lokuhamba.
Ngale nto engqondweni, kuya kufuneka ucinge ngokuvula esinye sezikhundla zimbini zilandelayo:
Long - Ukuba towokugqibela umyinge wokuhamba kweentsuku ezingama-300 ungaphantsi komndilili weentsuku ezingama-25 ezihambayo.
Mfutshane - If towokugqibela umyinge wokuhamba kweentsuku ezingama-300 mkhulu kunomndilili weentsuku ezingama-25 ezihambayo.
Uya kudinga ukuthengisa isibini sakho ukuze uphume kurhwebo lwakho ukuba uvula indawo ende (kunye ne-visa-versa).
UkuHamba okuMncinci okuSisiseko
Esi sesinye isibonisi se-forex esisetyenziswa rhoqo. Umndilili ohambahambayo olula (aka SMA) usebenza ngezinga eliphantsi kunexabiso lentengiso langoku (elaziwa njengesalathiso esisaleleyo). Ngapha koko, isebenzisa idatha yexabiso elinembali. Ngapha koko, nangaphezulu kunezinye iindlela ezininzi.
Isalathiso esihle sokuba ixabiso lakutshanje liphezulu kunexabiso elidala xa umndilili wokuhamba ixesha elide ungaphantsi komndilili wokuhamba osisigxina. Oku kungathathelwa ingqalelo njengophawu lokuthenga ngenxa yokunyuka okuphezulu kwintengiso.
Kwimeko echaseneyo xa i-avareji yokuhamba kwexesha elide iphezulu kunomyinge wokuhamba wexesha elifutshane, le nto ikhomba kumqondiso wokuthengisa ngenxa yendlela esezantsi. Ukuhambisa i-avareji zihlala zisetyenziswa njengobungqina bendlela yonke, endaweni yeempawu zokurhweba kwangaphambili.
Oku kuthetha ukuba ungadibanisa zombini iindlela ukuze ufumane umjelo wokuqhekeka okungahambelani kwinqanaba eliqhelekileyo lokuhambisa okuphakathi kubonisa. Ewe kunjalo, le yindlela entle yokwenza ukuba uphawu lwakho lokuphuma lube nemveliso ngakumbi. Ukuba uxelelwe ngesiginali yokuthengisa, oku kubonisa ukuba umndilili wokuhamba wexesha elifutshane ungaphantsi kwalowo wexesha elide lokuhamba, ngenxa yoko unokufuna ukubeka iodolo yokuthengisa.
Nangona kunjalo, ukuba unikwe umqondiso wokuthenga, oku kuhlala kuthetha ukuba i-avareji yokuhamba kwexesha elifutshane iphezulu kunaleyo yexesha elide yokuhamba.
Sebenzisa ikhefu njengemiqondiso yorhwebo, ukuqhawuka kuthathwa njengesicwangciso sexesha elide. Okubizwa ngokuba 'kukudityaniswa', ngamanye amaxesha iimarike ziyatshintsha phakathi kokuxhathisa kunye neebhendi zenkxaso. Ukuqhawuka kukodwa kwenzeka xa imarike iqhubeka ngaphezu kwale mida yokudibanisa- nokuba iphantsi okanye iphezulu. Kananjalo, ukuqhekeka kufuneka kwenzeke qho xa kuvela imeko entsha.
Ngokujonga ikhefu, uya kuba nesiboniso esihle sokuba imeko entsha iqale okanye hayi. Ngale nto ithethwayo, oku akuthethi ukuba ukuphuma ngo-100% kuchanekile ekubonakaliseni imeko entsha. Kule meko, unokufuna ukusebenzisa i-stop-loss order ukukunika ithuba elingcono lokuphepha ilahleko enkulu.
Ukurhweba nge-Forex: Iingozi ezinokubakho
Njengobukhazikhazi njengekhondo lomsebenzi kurhwebo lwe-forex olunokuvakala, kukho inani leengozi ekufuneka uzithathele ingqalelo. Kula macandelo angezantsi e-forex yethu yokurhweba ngePDF, sivavanya le mngcipheko ngokunokwenzeka ngokweenkcukacha.
Umngcipheko wentengiselwano ngokunxulumene nenqanaba lotshintshiselwano kunye nayiphi na umahluko wendawo ngexesha. Oku kuthetha ukuba kukho ithuba lokuba ngaxa lithile phakathi kokuqala nokuphela kwesivumelwano esinokuthi amazinga otshintshiselwano abe nokutshintsha. Umngcipheko woku kuyenzeka uphakama kunye nexesha elininzi elidlulayo phakathi kokungena kwisivumelwano kunye nokulungisa ikhontrakthi efanayo.
Umngcipheko apha kukuba ukuba inzala yelizwe iyawa, imali yelo lizwe iya kuba buthathaka. Oku kukhokelela kubatyali mali ekurhoxiseni utyalomali, kwaye ngenxa yoko, imbuyekezo yakho iya kuba sezantsi.
Iindaba ezimnandi zezokuba xa ireyithi yemali inyuka, kunokwenzeka ukuba imali leyo iya kuba namandla. Xa oku kusenzeka, ukubuya kwakho kunokuba ngaphezulu. Kungenxa yokuba abatyali mali abanamava bayathanda ukufumana ukubonakaliswa kwezezimali ezinamandla.
Ukuphakama kokuphakama kwakho, kokukhona ilahleko zakho okanye izibonelelo ziya kuba. Ewe kunjalo, oku kuthetha ukuba ukunyusa kunokuchaphazela ukurhweba kwakho ngendlela elungileyo okanye engalunganga- kuxhomekeke kwindlela ehamba ngayo.
Abarhwebi abathengisa kakhulu kwi-Forex ka-2021
Inxalenye yokugqibela ye-forex yethu yokuthengisa i-PDF kukuphonononga ukuba ngabaphi abadayisi abathandwayo ngabathengisi abatsha kunye nabathengisi abanamava. Nganye yeqonga lokurhweba le-forex elidweliswe apha ngezantsi sele lihlolwe kwangaphambili, oko kuthetha ukuba unokuqiniseka ukuba bayakufaka kwiibhokisi ezininzi.
Oku kuthetha ukuba iqonga ngalinye lilawulwa, libonelela ngeemfumba zeeparts zangaphambili, zineekhomishini eziphantsi kunye nemirhumo, kwaye ixhasa iindlela ezininzi zokuhlawula.
I-AVATrade ngumrhwebi osekiweyo onikezela amawaka ezixhobo zemali. Ngaphezulu kwesitokhwe, ii-indices, izinto zorhwebo kunye nee-cryptocurrensets (zonke zisebenzisa iiCFD), unokuthengisa iimfumba zezibini zangaphambili. Akukho zikomishini zorhwebo zokuhlawula, kwaye ukusasazeka kukhuphiswano olukhulu.
Ungathengisa ngeqonga lewebhu le-AvaTrade, okanye nge-MT4. Ubuncinci beedipozithi ezisemthethweni kwi $ 100, onokuthi uququzelele ngayo ngedebhithi / ikhadi lekhredithi okanye iakhawunti yebhanki. Iqonga lilawulwa kakhulu, kunye neelayisensi ezininzi phantsi kwebhanti lalo.
Sele siyenzile ukuza kuthi ga ngoku ngokuthengisa ngePDF yethu ye-forex, kufanelekile ngoku ukuba uqonde ukuba uhlalutyo lobuchwephesha lusebenza njani, kwaye ube nokuqonda kakuhle iziseko zoqoqosho olukhulu ezikhokela amaxabiso emali. Uxhotyiswe ngalo lonke ulwazi oluluncedo olufakiwe kwesi sikhokelo, kuya kufuneka ulungele ukuphuma apho kwaye uqale urhwebo lwe-forex. Ngethemba, ukwenza inzuzo kunye nokufunda ngakumbi apha endleleni.
Ukuba ungumrhwebi onemali encinci, unokufumanisa ukuba ukurhweba kufanelekile kufanelekile. Ukuba unayo ingxowa mali yorhwebo enkulu kuwe, unokuba namava anenzuzo ngakumbi kurhwebo olusisiseko olusekwe. Nokuba yeyiphi indlela, wNdincoma ukuba uzame iakhawunti yedemo yasimahla apho kunokwenzeka khona ngaphambi kokurhweba ngemali oyisebenzele nzima. Kananjalo nokufunda izikhokelo eziluncedo ezifana nezethu, eneneni ukufunda ngokwenza kuya kukubonelela ngengqondo engcono yokuba isebenza njani kwaye ungathanda ukuzithengisa njani.
Ithetha ntoni i-forex?
I-Forex njengegama libhekisa 'kutshintshiselwano lwangaphandle'. Ngokukodwa, ibhekisa kwinkqubo yokuthenga nokuthengisa ngababini bemali njenge-GBP / USD kunye ne-USD / ZAR.
Uyenza njani imali kwi-forex?
Uya kwenza imali ngeziganeko ezibini ezahlukeneyo. Ungathenga isibini semali esingaphantsi kokuba usithengisela (iodolo ende), kwaye uthengisa isibini semali esingaphantsi kwaso usithengile (iodolo emfutshane).
Yintoni ekusasazeni kwi-forex?
Ukusasazeka ngumahluko phakathi kwebhidi kunye nexabiso lokubuza ngezibini zangaphambili. Lo msantsa kumaxabiso kufuneka ubandakanywe kwingqikelelo yakho yenzuzo kunye nelahleko, kwaye yindlela umrhwebi aqinisekisa ngayo ukuba iqonga lisoloko lisenza imali.
Yintoni elungileyo ekusasazeni urhwebo lwe-forex?
Oku kuxhomekeke kudidi lwezibini zangaphambili othengisayo. Ukuba urhweba kakhulu ngee-majors ezingamanzi njenge-EUR / USD, akufuneki ubhatale ngaphezulu kwepip.
Yintoni ipip kwi-forex?
Umbhobho ubhekisa kwintshukumo yendawo enye yedesimali kwisibini. Umzekelo, ukuba i-GBP / iXabiso lixabiso kwi-1.2450, kwaye ihambela kwi-1.2451, ke oku kukuhamba kombhobho omnye.
Yeyiphi imida yokuphakama ekhoyo xa urhweba nge-forex?
Oku kuxhomekeke kwizinto ezininzi, ezinje ngendawo okuyo, isibini semali, kunye nomrhwebi uqobo. Kwiimeko ezininzi, abarhwebi abavela e-UK nase-Yuropu bathabathela ku-1: 30 kwizibini eziphambili kunye ne-1: 20 kwiibini ezincinci nezingaqhelekanga.
Ukutyibilika kuthetha ukuba iodolo yakho ye-forex yenziwa ngexabiso elahlukileyo kolo ubucele lona.